नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् विद्या, सँगैका विद्यार्थी नेता मन्त्री-मुख्यमन्त्री भइसके
जनतापाटी डेस्क सोमवार, मंसिर १६, २०७६, ०८:४१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कास्की निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट सत्तारुढ नेकपाकी विद्या भट्टराई (अधिकारी) प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । कांग्रेसका खेमराज पौडेलको भन्दा ८ हजार ४ सय ३ मत बढी ल्याई भट्टराई निर्वाचित भएकी हुन्  । उनले २४ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउँदा पौडेलले १५ हजार ९ सय ९१ मत पाए ।
उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ यही एक मात्र क्षेत्र थियो । र, मन्त्री पदमा रहँदा विद्याका श्रीमान रवीन्द्रको निधन भएका कारण एवं रवीन्द्रले तीन पटकसम्म जितेको ठाउँ भएकाले यो क्षेत्रमा आम चासो थियो ।
कास्की बाटै अधिकारी दुई वटै संविधानसभा सदस्य र ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । अधिकारी पत्नी भट्टराईले उपनिर्वाचन जितेसँगै श्रीमानले ह्याट्रिक गरेर रचेको इतिहास एवं विरासतलाई जोगाएकी छन् ।
रवीन्द्रले तत्कालीन एमालेबाट कास्की २ मा जित हासिल गरेका थिए । उनले कांग्रेस उम्मेदवार देवराज चालिसेलाई हराएका हुन् । अधिकारीले २७ हजार २०७ मत ल्याउँदा चालिसेले १८ हजार ६६१ मत पाएका थिए । रवीन्द्र र विद्याको जित अन्तर अलिकतिले फरक छ । रवीन्द्रले ८ हजार ५४५ मत अन्तरले जितेका थिए भने, विद्याले ८ हजार ४०३ मत अन्तरले विजय हासिल गरिन् ।
वर्षले ४७ पुगिन्, विद्या । श्रीमानको निधनपछि उनी त्रिविको उपप्राध्यापकबाट राजीनामा दिएर चुनावमा होमिइन् । श्रीमान्को निधनपूर्व उनी सक्रिय राजनीतिमा थिइनन् । विवाहपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय रहिनन् । प्राध्यापन गर्थिन् । उपनिर्वाचनमा उनलाई कास्की जिल्ला कमिटीले एकल उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिदियो । पहिले त अन्य गाइँगुइँ पनि सुनिकए । वामदेव गौतमको चर्चा कास्की २ मा भएको थियो । पछि, वामदेव आफैले त्यहाँबाट चुनाव लड्दिन भनेपछि त्यो चर्चा त्यहीँ सेलायो ।
विद्याले सुरुमा उम्मेदवार बन्न ईच्छा देखाएकै थिइनन् । तर, पार्टीको दबाबले सक्रिय राजनीतिमा उनको पुनरागमन गरिदियो । २०२९ कात्तिक २९ मा काठमाडौंमा जन्मिएकी भट्टराई १२ वर्षकै उमेरमा राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । तत्कालीन एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट उनले राजनीतिमा पाइला टेकेकी हुन् ।
पशुपति मित्र मावि चावहिल काठमाडौंमा ७ कक्षामा पढ्दै गर्दा तत्कालीन एमाले निकट अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएकी हुन्, उनी । ०४५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा विभिन्न स्कुलमा विद्यार्थीलाई संगठित पारेकी उनी ०४७ मा पद्मकन्या क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीमा जोडिइन् । त्यही वर्ष अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला समिति काठमाडौंको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी विद्या जनसांस्कृतिक परिवारको सदस्य हुँदै तत्कालीन एमालेको संगठित सदस्य बनिन् ।
०४८ मा अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रिय परिषद्मा निर्वाचित भट्टराई त्यही वर्ष एमालेको वडा कमिटी सदस्य बनेकी थिइन् । उनी ०४९ मा पद्मकन्या क्याम्पसमा स्ववियु सभापतिको उम्मेदवार बनिन्  । ०५० बाट अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुखका रूपमा सक्रिय भइन् । अनि, जतिबेला रवीन्द्र अधिकारी अनेरास्ववियुको महासचिव थिए, त्यो बेला उनी अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव थिइन् । यो कुरा, ०५५ को हो । अनेरास्ववियुको एउटै कमिटीमा महासचिव र सचिव रहेका रवीन्द्र र विद्याको ०५६ असार २६ मा विवाह भयो ।
केही समयपछि उनी सक्रिय राजनीति छाडेर प्राध्यापनतर्फ लागिन् । ०५८ मा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट प्राध्यापन थालेकी उनी चुनावमा होमिनुअघि त्रिविमा उपप्राध्यापक थिइन् ।
रोचक त के भने उनी केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दा अनेरास्ववियु अध्यक्ष रहेका शंकर पोखरेल अहिले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री छन् । अहिले पर्यटनमन्त्री रहेका योगेश भट्टराई अध्यक्ष र रवीन्द्र अधिकारी कोषाध्यक्ष हुँदा उनी महिला विभाग प्रमुख थिईन् ।
अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव हुँदा विवाह भएपछि उनी राजनीतिक यात्रा छोडेर प्राज्ञिक अध्ययनतिर लागिन् । अघिल्लो वर्ष हेलिकोप्टर दुर्घटनामा श्रीमानको निधन भएपछि नेकपाले त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको हो । अब उनले कास्की २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गाैतमले भने अनुसार हुने हो भने त उनको मन्त्री पद पनि पक्का छ ।
विजयोत्सवमा श्रीमानको सम्झना
कास्की–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचिथ भएपछि विद्या भट्टराईले जनता र श्रीमान रवीन्द्र अधिकारीलाई सम्झिइन् । भावुक हुँदै उनले आफ्नो भन्दा पनि जनता र रवीन्द्रको जित भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले चुनावका दौरान जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्ने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मलाई जनताले दिएको यो अभिभारा गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्नेछु, जनताको घर दैलोमा आइरहनेछु ।’
आफ्नै सन्तान मार्ने निष्ठुरी बाबुआमाः १५ जना मारिए बुधवार, असार १८, २०७६, १३:१२:००
नेकपाका अध्यक्षद्वयले गरे सहमति : प्रतिवेदनमा प्रचण्डकै लाइन, बैठक अध्यक्षता कसले गर्ला ? सोमवार, असार २३, २०७६, ०८:४८:००
के तपाईको युरिक एसिड बढ्यो ? नडराउनुहोस् यस्तो छ घरेलु उपचार आइतवार, बैशाख ८, २०७६, ०९:४७:००